1 st Runner Upဆုနဲ့ ကျေနပ်ပိုင် ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Burmese Ghouls အ သင်းကို သူမရဲ့ ရင်ထဲက Winner ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး ဝန်းရံလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ် – XB Media Myanmar
1 st Runner Upဆုနဲ့ ကျေနပ်ပိုင် ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Burmese Ghouls အ သင်းကို သူမရဲ့ ရင်ထဲက Winner ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး ဝန်းရံလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်
ပရိသတ်ကြီးရေ (၂၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ) မော်ဒယ်ေ လာက ကြော်ညာလောကမှာ ထူးထူးကဲကဲ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ရင်း ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေမှာပါ နာမည်ရအောင်မြင်ခဲ့သူ စမိုင်းလ်ဟာ အင်္ဂ လန် ကနေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အနုပညာ လုပ်ငန်းကိုတဖက်တစ် လမ်း ကနေ လုပ်ကိုင်ရင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ချစ်ရတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အတူ ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝကို အောက်ခြေကနေ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အတူ ခက်ခက်ခဲခဲ စတင်လာခဲ့ပြီး ချမ်းသာတဲ့ဘဝ ရောက် ရှိဖို့ အတူတူကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေကိုလဲ အင်တာဗျူးတွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေလေ့ရှိသူပါ။ အ မြဲပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာမိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အလှူအတန်းဆိုလည်းလက်မနှေးဘဲ ဘာသာရေးမှာလည်း ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ကာ ဦးဆောင်လုပ်တတ်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။
အမြဲ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ Smileကတော့ ဒီနေ့မှာ M2 World Championship မှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့E-Sport မြန်မာကိုယ် စားပြု Burmese Ghouls အသင်းအတွက် ”ကိုယ်တွေအ တွက်တော့ Winner ပါကလေးတို့ရေ။ မြန်မာပြည်ကြီးကနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။
You are our winner #BurmeseGhouls keep your heads up high and be proud of being Myanmar! ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ 1 st Runner Upဆုနဲ့ ကျေနပ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Burmese Ghouls အသင်းကို အားပေးစကားပြောကြားခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ် ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လို က်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ) ေမာ္ဒယ္ေ လာက ေၾကာ္ညာေလာ က မွာ ထူးထူးကဲကဲ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရင္း ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုေတြမွာပါ နာမည္ ရေအာင္ျမင္ခဲ့သူ စမိုင္းလ္ဟာ အဂၤ လန္ ကေန ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿ ပီးေ နာက္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းကိုတဖက္တစ္ လမ္း ကေန လုပ္ကိုင္ရင္း စီးပြားေရး လု ပ္ငန္းေတြကိုပါ ခ်စ္ရတဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔အတူ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ေယာ က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဘဝကို ေအာက္ေျခကေန အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ အတူ ခက္ခက္ခဲခဲ စတင္လာခဲ့ၿပီး ခ်မ္းသာ တဲ့ ဘဝ ေရာက္ ရွိဖို႔ အတူတူႀကိဳးစားခဲ့ရပုံေတြကိုလဲ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ျပန္လည္ မွ်ေဝေ လ့ရွိသူပါ။ အ ၿမဲေပ်ာ္႐ႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမိသားစုေလးကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အ လႉအတန္းဆိုလည္းလက္မေႏွးဘဲ ဘာသာေရးမွာလည္း ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္ကာ ဦးေဆာ င္လုပ္တတ္တဲ့မင္းသမီးတစ္လက္ပါ။
အၿမဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့ Smileကေတာ့ ဒီေန႔မွာ M2 World Championship မွာ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့E-Sport ျမန္မာကိုယ္ စားျပဳ Burmese Ghouls အသင္းအ တြက္ ”ကိုယ္ေတြအ တြက္ေတာ့ Winner ပါကေလးတို႔ေရ။ ျမန္မာျပည္ႀကီး ကေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္။
You are our winner #BurmeseGhouls keep your heads up high and be proud of being Myanmar! ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ 1 st Runner Upဆုနဲ႔ ေက်နပ္ပိုင္ဆို င္ခဲ့ရတဲ့ Burmese Ghouls အသင္းကို အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဖတ္ ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ ႀကီး အားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လို က္ပါတယ္ေနာ္။
သဲတုံလေးရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတုန်း ယွန်းယွန်းရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူစက်လှေစီးကာ ပျော်ပျော်ပါးပါးလည်ပတ် နေ ကြတဲ့ ခင်လှိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံ
အိမ်ထောင်ကျပြီးပြီးချင်း သမီးကြီး စိုးမြတ်သူဇာကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ခဲ့ရ ကြောင်ပြောပြလာတဲမိခင်စိုးကြည်ဖြူ